बिहानै बस ले ठ८क्क’र दिँदा आफ्नो सानाे बालकलाई छोडेर बिदा भइन कमला ! – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ११, २०७७ समय: १:२६:३८
मान्छेको जीवन कसरी सकिन्छ त्यो कसैलाइ था नहुने रहेछ अ८लबिदा । लम्की चुहा नगरपालिका भित्र हुने दिनानु दिन हुने सवारी दु८र्घ’टना मा किन लाप८रबाही हुँदै छ यहाँ को स्थानिय निकाय यो बिसयमा किन मौन हुन्छ? आखिर कहिले सम्म यसरी कलिलै उमेरमा कति जनाले ज्या८न गुमाउनु पर्ने हो सरकार महिना मा द८र्जनौ सम्म सवारी दु८र्घट८ना हाम्रो लम्की चुहा मात्र किन? लम्की चुहा 1 थकाली पुर A टोल मा बस्ने दाइ अभि देबकोटा र बिशनु देबकोटा को जेठी बोइनी तिम्रो आत्माले शान्ती पावो८स बै८कुन्ठमा बाँस होस । सोकाकुल परिवार जन प्रती गहिरो समबेदना प्रकट गर्दछु ।
Last Updated on: March 24th, 2021 at 1:26 am
२२५३ पटक हेरिएको